January 20, 2021 - Achawlaymyar
သင့်ဗီဇရဲ့ အမှောင်ခြမ်းကို ဖော်ထုတ်ပေးမယ့် ကတ်သုံးကတ်
January 20, 2021 by Achawlaymyar
ကတ်နံပါတ် (၁) ကတ်နံပါတ် (၁) ကို ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင် သင်ရဲ့ အမှောင်ခြမ်းဟာ အပြစ်တင်စိတ် များခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘဝမှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှအလွဲတွေအတွက် တစ်ပါးသူကို အပြစ်တင်နေတတ်ပါတယ်။ သူများကို အပြစ်တင်တာလျှော့ပြီး အကောင်းမြင်စိတ် မွေးဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကတ်နံပါတ် (၂) ကတ်နံပါတ် (၂) ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သိပ်ဉာဏ်ကောင်းသူပါ။ ဘာကိုမဆိုနားလည်နိုင်စွမ်း မြင့်မားပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်သင့်တယ်၊ ဘာမလုပ်သင့်ဘူးလဲဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ ဦးနှောက်ကိုပဲ အသုံးများပြီး နှလုံးသားကို သိပ်မသုံးတဲ့အတွက် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူ၊ ရက်စက်တတ်သူ ဖြစ်နေတာက သင့်ရဲ့ အမှောင်ခြမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကတ်နံပါတ် (၃) ကတ်နံပါတ် (၃) ကို ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ အမှောင်ခြမ်းကတော့ လူတိုင်းမှာ မကောင်းတဲ့ … Read more
February 24, 2021 January 20, 2021 by Achawlaymyar
မိန်းကလေး တစ်ယောက်👩 ဘဝမှာ အရွယ်ရောက် လာပါပြီတဲ့ ရာသီ ကလာပြီ ၊ ထိန်းရပြီ ၊သိမ်းရပြီ ၊ ဂရုစိုက်ရပြီ ရည်းစား ထားပါပြီတဲ့ လွမ်းရပြန်ပြီ၊ ဆွေးရပြန်ပြီ ၊ ကြေကွဲရပြန်ပြီ ၊ ခံစားရပြန်ပြီ အိမ်ထောင်ပြု ပါပြီတဲ့ မိဘ ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ ခွဲရပြန်ပြီ ၊ ငိုရပြန်ပြီ အိမ်ထောင် ကျပါပြီတဲ့ ယောက်ျားလည်း ထိန်းရ ၊ အိမ်ကိုလည်း သိမ်းရ ယောက္ခမ ကိုလည်း ဂရုစိုက်ပေးရ ၊ သားသမီးတွေကိုလည်း သွန်သင်ပေးရ ၊ ခန္ဓာကိုယ်က ယောက်ျား အတွက် အချိန်တွေက သားသမီး အတွက် သတိရနေတဲ့ စိတ်က မိဘ အတွက် ပင်ပန်း နွမ်းနယ်မှု နဲ့ … Read more
“ မျက်ခုံးလှုပ် ၊အသားလှုပ်ခြင်းတို့၏ နိမိတ်အဟော ”
အသားလှုပ်နိမိတ်ကျမ်း (၁) ငယ်ထိပ်လှုပ်မူ မင်းပူဇော်ခံရအံ့၊ ချစ်ခင်သော မိတ်ဆွေများနှင်တွေ့ရအံ့။ (၂) လက်ဝဲဦးခေါင်းလှုပ်မူ သတင်းကောင်းကြားရအံ့၊ အကြံအစည် အထမြောက်အံ့။ (၃) လက်ယာဦးခေါင်းလှုပ်မူ လာဘ်ရအံ့။ (၄) လက်ယာအထက်မျက်ခုံးလှုပ်မူ လာဘ်ရအံ့။ အဆွေခင်ပွန်းကောင်းနှင့် တွေ့ကြုံရအံ့။ (၅) လက်ဝဲအထက်မျက်ခုံးလှုပ်မူ အကြံအစည်အောင်အံ့။ (၆) လက်ယာအောက်မျက်ရေခံလှုပ်မူ သူတစ်ပါးတို့နှင့် ခိုက်ရန်ညအမျက်ဒေါသရှိအံ့။ ချစ်သူနှင့် တွေ့ရအံ့။ မယားရအံ့။ (၇) လက်ဝဲအောင်မျက်ရေခံလှုပ်မူ ငိုရအံ့။ဆင်းရဲအံ့။ (၈) လက်ယာနားလှုပ်မူ ချမ်းသာအံ့၊ သုခရအံ။ (၉) လက်ဝဲနားလှုပ်မူ သူတပါးနှင့် ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ပွားရအံ့။ ဥစ္စာပစ္စည်းရအံ့။ (၁၀) လက်ယာဘက်နှာခေါင်းလှုပ်မူ ချစ်ခင်သူများပြီး မိတ်ဆွေကောင်းရအံ့ (၁၁) လက်ဝဲဘက်နှာခေါင်းလှုပ်မူ ချမ်းသာသုခကို ရအံ့ (၁၂) ဦးခေါင်းလှုပ်မူ ငယ်သူမှာကြင်ယာရအံ့။ ကြီးသူမှာ ဥစ္စာရအံ့။ (၁၃) … Read more
“လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး ကျိန်းသေ ဖြစ်လာမယ့်သူတွေမှာသာ မြင်တွေ့ရမယ့် စရိုက်လက္ခဏာများ”
အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးဆိုတာ လွယ်လွယ်လေး ဖြစ်သွားကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့တွေမှာ တခြားသူတွေထက် ထူးခြားနေတတ်တဲ့ အရာတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကပဲ သူတို့ကို လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးတွေ ဖြစ်သွားစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး ဖြစ်လာမယ့် သူတွေမှာ ဒီလို အချက်တွေ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ၁။ ဇီဇာကြောင်တယ် ဒါကတော့ အဓိက အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဇာကြောင်တတ်တဲ့ အကျင့်ကတော့ တနည်းနည်းနဲ့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းမှု အပိုင်းမှာ ဇီဇာကြောင်တာ၊ လူတွေနဲ့ ဆုံရင် ဇီဇာကြောင်တာ၊ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သတ်ရင် ဇီဇာကြောင်တာ စသဖြင့် တစ်ခုခုမှာ ပုံမှန်ထက် လွန်လွန်ကဲကဲ ဇီဇာကြောင်လွန်းတာက လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးတွေမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ အချက်လည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ၂။ … Read more
လက်ဖဝါးပေါ်က ‘X’ အက္ခရာ ပါရှိသူများရဲ့ ထူးခြားချက်များပေါင်းချုပ်….
သင့်လက်ဖဝါးမှာ ‘X” အက္ခရာပါရှိပါသလား။ပါခဲ့ရင်တော့ သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သုတေသနပြုလုပ်ချက်များအ ရသော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာဗေဒင်နည်းအရပါ အတိအကျပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီ လက္ခဏာဟာ လူ ၂သန်းမှာ ၃ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဘဲပါတာဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်မချဘဲအောင်မြင်သူများဖြစ်တယ်။သူများတွေက အောင်မြင်ဖို့အတွက် အစီအစဉ်တွေချပြီး လုပ်ရတတ်ပေမယ့် ဒီအမှတ်အသားပါသူတွေကတော့ အစီအစဉ်ချစရာမလိုဘဲ အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။သူတို့သည် အကြီးမြတ်ဆုံးသောအရာတွေကို လုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ထိုးထွင်းသိစိတ်ရှိကြတယ် X ပုံစံ လက္ခဏာရှာရှင်များသည် ဝမ်းတွင်းစိတ်၊ အလိုလိုသိစိတ် ပါလာတတ်ကြသည်။သူတို့ကို လိမ်လို့မရပါ။ သစ္စာတရားကို တန်ဖိုးထားပြီး အရာရာကို အသေးစိတ် သတိထားမိတတ်ကြသည်။ ထိုးထွင်းစိတ်လည်း အရမ်းမြင့်မားပါတယ်။ဆဌမ အာရုံရရှိထားသော သူများဟုဆိုနိုင်သည်။ လူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီအမှတ်အသားပါတဲ့သူတွေအတွက် စိတ်ရော၊ကိုယ်ပါ ပင်ပန်းရတတ်ပါတယ်။ လူအများချစ်ခင်နှစ်သက် အားကိုခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအားကိုးခြင်းခံရတဲ့အတွက် သူများကိစ္စများ လိုက်လံဆောင်ရွက်ရလေ့ရှိပြီး ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ပင် ပန်းရနိုင်သည်။မကောင်းသော သမာအာဇီဝမကျသော အလုပ်တွေနှင့်လည်း အကျိုးမပေးတတ်ပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် … Read more
သင့်ချစ်သူ သင့်ကိုအမြဲလွမ်းပြီး ဖုန်းခဏခဏခေါ်စေချင်ရင် ဒါတွေလုပ်ကြည့်ပါ…
ချစ်သူက ဖုန်းမခေါ်ရင်သာ စိတ်ကောက်မယ်၊ ဖုန်းခေါ်လို့ စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးတော့ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ချစ်တဲ့ သူက ခဏခဏဖုန်းခေါ်တာကို(အလုပ်ရှုပ်တဲ့ အချိန်ကလွဲလို့)လူတိုင်း ခံချင်ကြမှာပါ။ ချစ်သူ့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အချိန်ပြည့်နေရာယူထားချင် ရင်၊ ချစ်သူက ကိုယ့်ကို မကြာခဏလွမ်းတာကို ခံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအတိုင်းကြီးနေလို့တော့ မရပါဘူး။ နည်းနည်းတော့ မာယာပရိယာယ်လေးတွေ လိုပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ကို သုံးကြည့်ပါ။ ချစ်သူက သင့်ကို လွမ်းပြီး ခဏခဏ ဖုန်းခေါ်စေချင် ရင် လုပ်ရမှာတွေကတော့…. (၁) ချစ်သူကို အံ့သြအောင်လုပ်ပါ… အရင်ဆုံး သူ့ရင်ထဲမှာ ကိုယ့်ကို လွမ်းတဲ့ စိတ်ဖြစ်လာအောင် လုပ်ရပါမယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်ဖို့အတွက် လုပ်ရမှာက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိနေတဲ့ Open Book မလုပ်ပါနဲ့။ လျှို့ဝှက်တဲ့ … Read more
တနင်္ဂနွေ သားသမီးလေးကိုချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေသိသင့်တယ်နော်…
ချစ်သူအပေါ် အနိုင်ယူလိုတဲ့စိတ် ရှိတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အလိုကျအတိုင်း ဖြစ်စေချင်တဲ့သူမျိုး။ အရမ်းလည်း ချစ်တတ်ကြတယ်။ တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်းပေမယ့် အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့စရိုက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားနေတတ်ကြပါတယ် တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေဟာ စာဖတ် ဝါသနာပါကြတယ်။ ဗဟုသုတကို လိုက်စားတယ်။ အအိပ်မက်တယ်။ အစားမကြီးဘူး ဒါပေမဲ့ ခဏ ခဏ စားနေတတ်တာမျိုး၊ ဒေါသကြီးပေမဲ့ ကောက်ရိုးမီးလိုမျိုး။ ခဏပဲ ပြီးရင် သူမဟုတ်သလိုမျိုး၊ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက် လွယ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ပြေလွယ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ဟာ ချစ်စရာ ကောင်းနေတတ်ကြပြန်ရော။ ချစ်သူအပေါ် အနိုင်ယူလိုတဲ့စိတ် ရှိတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အလိုကျအတိုင်း ဖြစ်စေချင်တဲ့သူမျိုး။ အရမ်းလည်း ချစ်တတ်ကြတယ်။ … Read more
သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ လက်သည်းခွံ အရင်းနေရာ ကနေ ထွက်လာတဲ့ အဖြူရောင် လခြမ်းသဏ္ဍာန်လေးတွေကို သတိပြုမိ ပါသလား။ တကယ်တော့ ဒီလခြမ်းလေးတွေက လက်သည်းရဲ့ အရမ်းကို အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက လက်သည်းမှာပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဒီလခြမ်းလေးတွေ ကတဆင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို အများကြီးသိနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်… တရုတ်ဆေးပညာမှာ လက်သည်းပေါ်က လခြမ်းလေးတွေကို လေဖိအားတိုင်း ကိရိယာလိုပဲ ကျန်းမာရေးကိုတိုင်းတဲ့ ကိရိယာတစ်ခု အနေနဲ့ မှတ်ယူ ပါတယ်။ လခြမ်းရဲ့ အခြေအနေက သင့်ကျန်းမာရေး သင်္ကေတပါ။ ကျန်းမာရေးချွတ်ယွင်း လာတဲ့အခါမှာ လခြမ်းကပြောင်းလဲလာတာ၊ လုံးဝပျောက်သွားတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ လခြမ်းလေးတွေက မူလအခြေအနေအတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဆေးပညာရှင်များရဲ့ အဆိုအရ လက်ချောင်း ၈ … Read more
အိမ်တွင်းမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့ အရာ (၆) မျိုး သင့်အိမ်မှာ ဒီအရာတွေရှိနေရင်တော့ အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားလိုက်ပါ
သင့်အိမ်မှာ အကြောင်းအရာ ထွေထွေထူးထူးမရှိဘဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်လား။ ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့ကြားက အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေ ကျဆင်းနေလား။ အိမ်ထဲမှာ မကောင်းတဲ့ ဝိညာဉ်တွေရဲ့ အငွေ့အသက်တွေရှိနေတယ်လို့ ခံစားနေရလား “ဈေးသုံးလည်း မကြွယ်နဲ့၊ ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့” ဆိုသလိုရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းက ယနေ့တိုင် အကျုံးဝင်နေသေးတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို မေ့ပစ်လို့တော့ မရပါဘူး။ အခုပြောပြမှာကတော့ အိမ်ထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကြောင့်ချည်းပဲ ကံဆိုးနေတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီအရာတွေကြောင့် ပိုကံဆိုးသွားနိုင်တယ်၊ ကံကောင်းခြင်းတွေကို ပိတ်စေနိုင်တယ်လို့ပဲ ဆိုလိုပါတယ်။ သတိဟူသည် လိုသည်မရှိဘူး မဟုတ်လား။သင်ကံဆိုးနေတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့အခါ ဒီအရာတွေကို အိမ်ထဲမှာ၊ အခန်းထဲမှာ ထားမိလားဆိုတာ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ် (၁) လှုပ်ကုလားထိုင် ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ အခန်းထဲမှာ လှုပ်ကုလားထိုင်က ဘယ်သူမှလည်းမထိုင်ဘဲ လှုပ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ … Read more
🤍မနေ့ကထက် ဒီနေ့ပိုချစ်စေတဲ့နည်းလမ်း ( ၄ ) သွယ် 🤍
အချစ်ကြောင့် စိတ်ညစ်နေလား။ အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ်လို နားလည်မှုတွေထပ်ပေးရဦးမလဲ။ ပြဿနာတွေဆိုတာ အမြဲကိုယ့်ဆီဘဲ ရောက်လာ နေတယ် လို့ထင်သလား။ ဒီချစ်မိခဲ့တဲ့ရင်ခုန်သံလေးတွေ ကြောင့် ခေါင်းစားနေရတယ်ဆိုပါတော့။ ဒီတော့ အောက်ပါ နည်းလမ်းတွေနဲ့ မပျော်ရွှင်တဲ့ေ နရာမှာ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေ ခံစားနိုင်စေဖို့ လက်ရှိပြည့်စုံနေတဲ့ချစ်သူတွေကတော့ ပိုပီးတော့ ချစ်သက်ရှည်နိုင်ဖို့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အပေးအယူမျှ…..ဂရုစိုက်တတ်မှ တင်းကျပ်စွာချည်နှောင်ထားတဲ့ ချစ်နည်းထက် လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ နားလည်မှုပေးကြည့်ပါ။ အမြဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးကြပါ။ အချိန်တွေ မအားလပ်ရင်တောင် တစ်ပတ်တစ်ခါ စကားလက်ဆုံ ကျဆွေးနွေးပါ။ နွေးထွေးတဲ့ လက်တစ်စုံနဲ့အတူ ကမ္ဘာပတ်သလို လမ်းလျှောက် ထွက်ပေးပါ။ ဝေးကွာနေတဲ့ ချစ်သူတွေကတော့ ညအချိန်မှာ ဖုန်းပြောရင်း SMS ပို့ရင်း … Read more